Raharaham-pirenena : Gaboraraka tanteraka -
AccueilSongandinaRaharaham-pirenena : Gaboraraka tanteraka
Raharaham-pirenena : Gaboraraka tanteraka
15/09/2018 admintriatra Songandina 0
Mikatso ny fiainam-pirenena ary manjaka ny gaboraraka vokatry ny lalàm-panorenana ny taona 2010, izay noteren’ny fitondrana Tetezamita tarihin’ i Andry Rajoelina nolaniana. Isan’ny tena nokendren’izy ireo tamin’ity lalàm-panorenana ity, ny hampiditra ny firenena amin’ny kizo. Porofon’izany ny fanerena ny filoham-pirenena amperin’asa, hiala amin’ny toerany enimpolo andro alohan’ny fifidianana. Niniana tsy nasiana lalàna, aro fanina ho an’ny mpandimby azy. Nanampy trotraka ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, izay tsy nanisy vidiny ny fiainam-pirenena ka tsy nanome fahefana ihany koa ny mpisolo toerana. Rafitra mpanara-maso ambany fiahian’ny fiadidian’ny repoblika izao ny IGE “ inspection general de l’état”, izay mpanara-maso ny fampiasana ny volam-panjakana. Araka ny lalàna, dia tsy mihetsika izy ireo raha tsy misy ny baikon’ny Filoha. Izany hoe nanomboka tamin’ny fametraham-pialan’i Hery Rajaonarimampianina, malalaka ny fanodinkodinam-bola anivon’ny sampandraharaham-panjakana noho ny tsy fisian’ny rafitra mpanara-maso. Nomen’ny lalàm-panorenan’ny repoblika fahefatra alalana hangalatra izany ireo tompon’andraiki-panjakana.
Ankotra ny IGE, rafitra iray tarihin’ ny filoham-pirenena ny CSM, na ny filankevitra ambonin’ny fitsarana. Ity rafitra ity, izay manara-maso ny asam-pitsarana. Afaka manasazy ireo mpitsara, tsy manao ny asany ara-dalàna. Ankehitriny anefa, iza no tsy mikolay amin’ny resaka kolikoly eny amin’ny fitsarana. Ny filoham-pirenena mpisolo toerana, tsy manana fahefana amin’ny CSM. Tsy hahagaga rahampitso, raha maro ireo hitaraina fa takona ny marina. Miisa telo ambin’ny folo any ho any ireo rafitra ambanin’ny fiadidiana ny repoblika no mandringa tsy misy mpitarika, ary misy fiantraikany be amin’ ny fiainam-pirenena izany . Rariny raha maro tamin’ ireo mpianatra siansa politika tao Paris, no nanda mafy ny handraisan’i Rajoelina Andry anjara tamin’ ny valandresaka narahina adihevitra nokarakarain’izy ireo. Ankehitriny aza araka ny vaovao voangona, dia efa miomana hiverina hanao ny asa ratsiny ireo mpanondrana andramena . Izany hoe, efa nokendren’ity mpanongam-panjakana ity mafy ny hamotika ny firenena. Mba ahafahany milaza, fa rehefa tsy teo amin’ny toerana intsony izy dia nanjaka ny gaboraraka eto amin’ny firenena. Paika efa voarafitra hatrany am-piandohana.
Lafrantsa : Tsy miantoka vola maloto
Nogiazan’ny PNF na « Parquet National Financier » any Frantsa ireo fananam-ben’i Mamy Ravatomanga ao Levallois Perret ny faha-25 sy 27 Jona lasa teo. Mifono hafatra goavana ho an’i Andry Rajoelina sy ny forongony anefa ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : «Ny fokontany sy ny kaominina no hiaingan’ny fampandrosoana»